मा`सुमा भन्दा बढी प्रोटिन हुने बहुगुणी झुसे करेला, जसकाे सेवन बाट हुने यि अपत्यारिला फाइदाहरु, जान्नुहाेस् ! – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / मा`सुमा भन्दा बढी प्रोटिन हुने बहुगुणी झुसे करेला, जसकाे सेवन बाट हुने यि अपत्यारिला फाइदाहरु, जान्नुहाेस् !
admin3weeks ago स्वास्थ्य Leaveacomment 136 Views
मा`सुमा भन्दा बढी प्रोटिन हुने बहुगुणी झुसे करेला, जसकाे सेवन बाट हुने यि अपत्यारिला फाइदाहरु, जान्नुहाेस् ! झुसे करेला स्वादका लागी मात्र नभइ स्वास्थका लागी पनि उ’त्तिकै उपायोगी हुन्छ । यसको तरकारीको सेवनले हाम्रो शरीरलाई अत्यन्तै फाइदा पुग्छ ।
चट्टेललाई धेरै श’क्तिबर्द्धक तरकारी मानिन्छ यसमा मासुको तुलनामा धेरै प्रोटिन हुन्छ अर्थात यो प्रोटिनको भण्डार हो । चट्टेलमा पाइन फा’इटो`केमि`कल्स शरीरलाई स्वस्थ बनाउनुको साथै यसमा भएको ए’न्टिअ`क्सिडेन्डले रगत सफा राखेर छा’ला सम्बन्धी रोग हुन दिँदैन ।
रु’घाखोकीबाट राहत प्रदान गर्नुको साथै रो’क्न समेत सहयोग गर्छ । यति मात्र होइन क्या’न्सर जस्तो प्रा- ण घा’त`रो’गलाई रो’क्न समेत सहयोग गर्छ । यसको से’वनले क्या’न्सरको रो’गीलाई समेत फाइदा पुग्छ । खा-सम्बन्धी विभिन्न रो’ग, मुटु रो’गको पनि रोकथाम गर्न सहयोग गर्छ ।
फाइबरको बढी मात्रा बढी भएकाले शरीरका लागि धेरै फा’इदाजनक छ तौल र उच्च र’क्तचापलाई नियन्त्रित गर्नेर् गुण पनि यसमा हुन्छ । यसमा प्रचुर मात्रामा आइरनसमेत पाइन्छ । काेराे-ना भा- ईरस (काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ र साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।
Previous आजको राशिफलः यी ४ राशिका लागि शुभ छ दिन
Next खुसिकाे खबर; अमेरिका र बेलायतबाट एक करोड डोज काे-राेना भ्याक्सिन ल्याउने यस्ताे तयारि !